Mpanonta rindrina, Mpanonta gorodona, Mpanonta Inkjet tànana - huakehengrun
telefaonina:+86 189 7131 9622
Desktop inkjet mpanonta printy
mpanonta inkjet cij
HKHR Rindrina mpanonta UV milina fandokoana rindrina
Mpanonta printy inkjet mivantana amin'ny rindrina mivantana
CMYK inkjet mpanonta printy ho an'ny rindrina rindrina fanontam-pirinty Mac ...
Ivelany rindrina zavakanto mpanonta Robot Wall Printer Pri...
3D UV Mural inkjet milina fanontam-pirinty mivantana amin'ny ...
Automatic Mural 3D Vertical rindrina mpanonta ...
Haingam-pandeha CMYK plastika satroka an-tserasera indostrialy C...
Miorina amin'ny rindrina rindrina mitsangana milina 3D Wall Pen
High Speed ​​​​CMYK Mask Logo Color UV inkjet mpanonta printy
Masinina Coding Printer Thermal Inkjet amin'ny tanana
Mini Portable daty coder inkjet mpanonta tànana
75mm Thermal Handheld inkjet mpanonta printy daty code ...
milina fanontam-pirinty UV 3D avo lenta
Wuhan HAE Technology Co., Ltd. nanomboka tamin'ny taona 2008, izay mpitarika izao tontolo izao amin'ny Inkjet Printing, fanontam-drindrina ary fanontana gorodona.Ity no rindrina voalohany eran-tany ary mpanonta rindrina misy zava-baovao indrindra azo ampiasaina amin'ny fanontana saika na inona na inona amin'ny toerana fisaka rehetra amin'ny kalitao avo be ka tsy hinoan'ny masonao izany.
huakehengrun Wheel karazana rindrina mpanonta dia maivana & aforitra ho an'ny tranporatioin, mora miasa, miorina tsara ary 2880dpi fanapahan-kevitra avo fanontam-pirinty.
Misy CMYK rano mifototra amin'ny ranomainty rindrina mpanonta printy sy CMYK + W UV ranomainty rindrina milina fanontam-pirinty ho an'ny safidy hihaona mpanjifa samy hafa ny fanontam-pirinty fangatahana fangatahana.
ho agrnnt anay
Ny ranomainty UV manify indrindra eran'izao tontolo izao dia mitsangana mandeha ho azy ...
Manana traikefa amin'ny famolavolana manankarena isika, fanodinana fitaovana tsara ary fahaiza-mamokatra.
Amin'ny fampiasana ny rafitra fanaraha-maso modular manan-tsaina mandroso ankehitriny, miaraka amin'ny fitaovana machining mandroso mba hahatonga ny ampahany, hahatonga ny fifindran'ny fitaovana ho marina kokoa, hetsika milamina kokoa, ary fiainana lava kokoa.
Ankehitriny, ny sekoly, trano fandraisam-bahiny, toeram-pivarotana, trano fandraisam-bahiny, akanin-jaza, salon hatsaran-tarehy, gym, ary ny rindrina ivelany amin'ny trano sasany dia mila fandokoana rindrina mba hahatsara tarehy.
Mieritreritra ny eritreritry ny mpanjifa sy izay tadiaviny, ny zava-drehetra avy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa, manomboka amin'ny fikarohana ka hatramin'ny famonoana, mba hihaona amin'ny fitondran-tena fanaon'ny tsirairay, hanatsara ny kalitaon'ny vokatra, ary hampihena ny vidin'ny famokarana.
Ny ekipan'ny R&D nahita fianarana ambony ao amin'ny orinasa dia miantoka ny fanavaozana mitohy sy ny fahombiazan'ny vokatra azo avy amin'ny orinasa, ka mahatonga ny vokatra ho an'ny orinasa hisongadina amin'ny fifaninanana tsena.
Ny orinasa dia manizingizina fa mifantoka amin'ny mpanjifa sy miompana amin'ny tsena, mba hahafahan'ny orinasa mitazona fitomboana mahomby maharitra.
Fitsipika fanasokajiana ny mpanonta inkjet
1. Mpanonta Inkjet mitohy Eo ambanin'ny fanerena ny paompy famatsiana ranomainty, ny ranomainty dia mandalo amin'ny fantsona ranomainty avy amin'ny fitoeran-dranomainty, manitsy ny tsindry, ny viscosity, ary miditra ao amin'ny basy famafazana.Satria ny...
Fikarakarana sy fikojakojana ny loha printy inkjet
Amin'ny maha singa fototra amin'ny mpanonta inkjet, ny lohany dia tena zava-dehibe.Ny loha printy dia tena sarobidy, ary tena maharary ny fampiasana azy mandritra ny fotoana maharitra.Mba t...
Adiresin'ny orinasa Beijing: 101A, Trano 11, tokotany 3, Lalana Gaolizhang, Distrikan'i Haidian, Beijing
Biraon'ny varotra any ivelany sy Afovoany Shina:
Ny rihana faha-6, tranobe 2A, Seranana Siansa sy Teknolojia Optika Valley, Lalana Guanshan, Lohasahan'ny Optika, Wuhan, Sina
telefaonina raikitra:+86 27 8750 8600
Mpanonta printy inkjet tanana
Mpanonta Inkjet an-tserasera